विवश वस्ती बिहिवार, आषाढ २९, २०७४
अचेल भेडाहरू प्रशन्न छन् । तिनै प्रशन्न भेडाहरूका हुलमा मैले केही भेडाहरूबीचको संवाद सुनेँ । संवाद धेरै नै रोचक औं घोचक पनि थियो । किनभने, भेडाहरूको चरन क्षेत्र विस्तारित भएको थियो । आखिर, भेडाहरूका निम्ति चरन क्षेत्र बढ्नुजति उपलब्धिमूलक काम अरू के नै हुन सक्थ्यो र ? एउटा भेडाले अर्को भेडालाई सोध्यो, ‘अचेल यो पहिलो चरन, दोस्रो चरन, तेस्रो, चौथो, दशौं, बीसौं चरन भनिरहेका छन् । के हो यो चरन भनेको ? हाम्रा चरन क्षेत्रहरूलाई कित्ताकाँट गर्न लागिएको त होइन कतै ?’
अर्को बुजुर्ग भेडाले आफूले बुझेको कुरा फटाफट बतायो, ‘मैले पनि यो चरनको कुरा केही समययता सुन्दै आएको छु । पहिलो चरन सकियो रे । दोस्रो चरन पनि सकियो रे । अब तेस्रो चरन हुँदैछ रे । मैले पनि यस्तै–यस्तै कुरा सुनेको छु । तर, पहिलो र दोस्रो चरनमा केही भेडाहरू छुटेका हुँदा तिनीहरूका निम्ति तेस्रो चरनको व्यवस्था गरिएको हो रे ।’ अर्को भेडाले आश्चर्यजनित स्वरमा भन्यो, ‘आखिर, यत्रा चरनहरूको व्यवस्था गरिएको रहेछ । तर, हामी भेडा जातिलाई भने केही जानकारीसमेत दिइएन । मलाई त आश्चर्य लागिरहेको छ ।’
एउटा भेडाले भने पटक्कै आश्चर्य मानेन । उसले नजिकैको ढुंगामा आफ्नो सिङ तिखार्दै भन्यो, ‘आखिर, भेडाहरूका निम्ति विभिन्न चरनहरू शुरु हुँदैछ । भर्खर दोस्रो चरन नि सकियो । अब तेस्रो चरनपछि अरू चरनहरू पनि होलान् । हामीलाई पक्कै पनि ती चरनहरूमा स्थान मिल्ने छ । आत्तिनुपर्ने कुनै कारण देख्दिनँ म त ।’अर्को भेडाले थप्यो, ‘अब सिंगो देशलाई नै चरन क्षेत्र बनाउँदै छन् भन्ने सुनेको छु मैले । तेस्रो चरन त असन्तुष्टखाले भेडाहरूका निम्ति हो रे । ती असन्तुष्ट भेडाहरूलाई सन्तुष्ट तुल्याउन नै तेस्रो चरन क्षेत्र घोषणा गरिएको हो रे ।’
‘चुप लाग ।’ अर्को भेडा करायो र उसले भन्यो, ‘भेडाहरूले चरन क्षेत्र पाएनन् भने तिनीहरू असन्तुष्ट नभएर के प्रफुल्ल हुन्छन् त ? भेडाहरूले चरन क्षेत्र खोज्नु स्वाभाविक कुरा हो । उनीहरू चरन क्षेत्र पाएनन् भने भड्किन्छन् । चरन क्षेत्रकै खोजीका लागि कहिले कसलाई गुहार्न पुग्छन्, कहिले कसलाई गुहार्न पुग्छन् । यो अचम्मको कुरै होइन ।’ ‘तर, तेस्रो चरनमा पनि उनीहरू चर्न आउँदैनन् भनिन्छ नि ? खास कुरा के हो ?’ एउटा भेडाले जिज्ञासा राख्दै सोध्यो । ‘यो त पहिलो र दोस्रो चरनमा हरिया, पोसिला घाँस चपाएर उग्राएकाहरूको पहलमा भर पर्ने कुरा हो ।’
एउटा भेडाले प्याच्चै भनिहाल्यो । र, उसले थप्यो, ‘हामी भेडा जातिहरू साच्चै भाग्यमानी हौँ । किनकि, एकपछि अर्को गर्दै चरनहरू थपिँदै गए । चरनहरू यतिविघ्न थपियो कि अब हामी जहाँ पनि चर्न सक्छौँ ।’ ‘सिंगो देश नै अब चरन क्षेत्रमा परिणत भइसक्यो । कतै सन्तुष्ट भेडाहरू चरिरहेका छन्, कतै असन्तुष्ट भेडाहरूले चर्न पाउनुपर्ने आवाज जोडदार ढंगले उठाउँदै छन् । पहिला–पहिला बाहिरतिरका भेडाहरू पनि आएर चरे । तर, अब हामी स्वदेशकै भेडाहरू चर्न पाउने भएका छौं । यो धेरै नै खुशी र उल्लासको विषय हो ।’ एउटा बुद्धिजीवी टाइपको भेडाले अनुहार उज्यालो पार्दै भन्यो । ती बुद्धिजीवी भेडाको उज्यालो अनुहार नियाल्दै छेउमै बसेका अरू भेडाहरूले पनि आफ्नो अनुहारमा चमक भित्र्याए ।